SAWIRRO: FAA'IIDOOYINKA IYO DHAAWACA JIDHKA BINI'AADAMKA - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay miraha waxtarka leh: sifooyinka faa'iidada leh iyo ka hortagga
Berdaha waxay leeyihiin magacyo badan: miro, fig, Smirninskaya ama toffee, boodhi. Waxay ka tirsan tahay dhaqanka ugu da'da yar ee dadka ku beeray. Sawirro waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro kala duwan, guud ahaan xoojinta jidhka iyo ilaalinta difaaca jirka, ujeedooyinka nafaqada iyo qurxinta.
Soo helitaanka ugu caansan ee miro la jaray ayaa laga helay degaanka Jordan. Sababtoo ah muddadaysanaansho buuxda, da'dooda waa la go'aamiyaa - ugu yaraan 11 kun oo sano. Iyaga oo ay ka baaraandegayaan xogta badan ee lagu duubay ilaha taariikhiga ah, qaababka gaarka ah ee berde ayaa loo yaqaan oo loo isticmaalaa tan iyo wakhtiyadii hore. Maalmahan, looma lumin bogsashadeeda iyo sifooyinka nafaqada, ama caan.
Kaloori iyo walxo kiimiko ah
Miraha berbera, waxay kuxirantahay kala duwanaanshaha, waa huruud, madow iyo buluug iyo madow. Waxay yihiin kuwo aad u dhadhan fiican leh oo hodan ku ah nafaqooyinka.
Calorie miraha cusub ma aha mid aad u weyn, inkastoo xaqiiqda ah in ay leedahay dhadhan aad u macaan. Miraha cusub waxay ku jiraan 49-57 kcal halkii 100 g. Sababta fuuqbaxa, mugga miro qallalan ayaa hoos u dhacaya, diiradana ku jirta sokorta. Qiimaha kalooriga wuxuu noqonayaa 244-257 kcal halkii 100 g.
Ma taqaanaa? Sawirro waa mid ka mid ah dalal badan oo ka mid ah Yurub iyo Aasiya, Masar iyo Hindiya iyo qaybo kale oo adduunka ah oo ay ku koraan. Qiimaha ay faa'iido u leedahay, sidaa darteed qiimo leh ee adduunka qadiimiga ah, waxay go'aamisay caan u ah Dhaqanka Masaaridu wuxuu siiyaa sifooyin bacrin ah, Hindiya - Dhaqanka Islaamku wuxuu u arkaa inuu yahay mid abuuraya, isagoo siinaya niyadda ruuxa iyo dhimashada, geedkii aadka u jilicsan ee miraha la mamnuucay.
Wixii 100 g ee badeecada, fig ka kooban yahay qiyaastii:
borotiinka - 3 g;
baruurta 0,8 g;
carbohydrate - 58 g;
dheef-shiidka - 18 g;
dabiici ah, dufan iyo dufan aan dufan lahayn - 2.4 g;
biyaha - 16 g;
Saccharides - 55 g;
istaarijka - 3 g;
ash - 3 g;
calcium - 144 mg;
magnesium - 59 mg;
sodium - 11 mg;
potassium - 710 mg;
Fosfooraska - 68 mg;
birta - 0.3 mg.
Intaa waxaa dheer, berry berri waxay leedahay awood xoog leh ee fiitamiinada: beta-carotene, vitamiin A, B1, B2, E, PP. In kastoo berde - cuntooyin aad u sarreeyat, waxay ka kooban tahay midda kuu ogolaanaysa in aad soo gashid berry kuwaas oo cunto ah.
Guryaha muhiimka ah ee berde
Midhaha canabkana khamri bay ku gubanayaan oo la qalajiyey. Isla mar ahaantaana, dhammaan faa'iidooyinka miro cusub ayaa la keydsadaa oo xitaa kordhiyaa miraha la qalajiyey iyadoo kordhinaysa diirada walxaha sida biyaha oo hoos u dhacaya.
Waxay wax ku biiriyaan:
dhakhsaha degdega ah ka dib xanuun;
hagaajinta hababka dheef-shiidka;
kicinta habka wadnaha;
shaqo sax ah oo sax ah;
Booqashada marka qufacaysa;
daaweynta qumanka loo yaqaan "tonsillitis";
ka saarida walxaha sunta ah jirka.
Noocyada saamaynta berbera iyo daroogada ayaa ka imanaya jirka:
Ma taqaanaa? Caleemaha, sida ku xusan halyeeyga kitaabiga ah, ayaa ahaa dharkii ugu horreeyay ee dadka ugu horreeya. Sawirada ka soo jeeda qowmiyaddii hore iyo dib-u-dhalashada, oo lagu ammaano quruxda jirka, xubnaha taranka ayaa daboolaya. Laga yaabee, waxaa loo doortay qaabka ugu dhow ee u dhow xubnaha gudniinka fircooniga ah.
Miraha cusub waxay leedahay sifooyin bogsiin leh oo caadi ah:
Waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurada fangas.
Kii si joogto ah wax u cunaa midho beroosh ah. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka waayeelka ah.
Midhaha miraha ah waa in loo isticmaalaa taxaddar xagga cunto ee haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya: faa'idooyinkoodu waa qaar, laakiin dhaawaca jidhka ayaa sidoo kale u muuqda. Haweeney uur leh waxay ku kici kartaa miisaanka kor u kaca, ama heerka sonkorta dhiigga ayaa kacda. Waxa uu ku kicin karaa colic ee ilmo yar isagoo sii maraya caanaha hooyada.
Waxa kale oo ay leedahay saameyn ku leh maqaarka.
Iyada oo ay ku jirto macdanta birta, cabitaanka miraha waxaa loo isticmaalaa daawaynta dhiig-yarida.
Magnesium iyo potassium ee ka kooban sheyga ayaa bixiya qalabka dhismaha iyo waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta murqaha wadnaha, waxay faa'iido u leedahay tachycardia.
Berry wuxuu leeyahay tayada qaaliga ah ee khafiifinta dhiigga, taas oo ka caawisa hoos u dhigida kolestaroolka waxayna yareysaa khatarta ah in uu ku dhaco atherosclerosis iyo thrombosis.
Waa muhiim! Isticmaalka berde ee cuntada waa qiyaas tallaalka ah ee cudurka uu qabo cudurka ischemic, iyo suurtagalnimada hypertension iyo wadno-qabka wadnaha ayaa sidoo kale hoos u dhacda. Cunista berrinkaan cajiibka ah wuxuu yaraynayaa halista atherosclerosis, thrombophlebitis iyo xitaa diabetes mellitus.
Daaweyntu waxay isticmaashaa miraha cusub, casiirka, decoctions iyo infusions iyaga. Infusions waxay bixisaa saameeynta anti-inflammatory iyo antiseptic, waxay leedahay saameyn ku-beddel ku yimaadda dheef-shiid kiimikaad. Caanaha caanuhu waa kuwo caan ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in dhammaan walxaha waxtarka leh ay ku jiri karaan miraha la qalajiyey, guryaha ay aad u kala duwan yihiin. Iyada oo la yareeyo qadarka biyaha, heerka sonkorta ku jirta waxay kordhineysaa 70%. Isla mar ahaantaana, heerka fitamiinada, macdanta, maadooyinka yaryar iyo macro iyo walxo kale ayaa isku mid ah.
Baro sida loo qalajiyo plomme, tufaax iyo pears guriga.
Maaddaama dadka intooda badani isticmaali karaan berri berri ah, waxay macno u tahay in ay tixgeliso faa'iidooyinka iyo in waxyeello jirka ka timaado.
Ma taqaanaa? Budhisnimadu waxay ula dhaqantaa sida muraayadda oo ah calaamad muujinaysa xaqiiqda ah in geedkan hoostiisa ah uu Buddha yimid si loo ogaado macnaha nolosha. Geedku sidoo kale waa mid ku caan ah Boqortooyada Roomaanka, tan iyo hooskeeda hoos u-gunteeda waxay quudisay caanaha Romulus iyo Rem. - Kuwa asaasiga ah ee Rome.
Waad ku mahadsan tahay miraha la qalajiyey wakhti kasta oo sanadka:
isbeddelka mindhicirka wuxuu hagaajinayaa;
jirka ayaa ka saaraya sunta iyo sunta;
unugyada isku xiran iyo kilyiyadu waxay u koraan si ka wanaagsan sababtoo ah pectins ku jira midhaha;
antioxidants waxay ka caawiyaan nadiifinta dhiiga ee jimicsiyada kolestaroolka, nadiifinta weelasha dhiiga yar yar iyo u siiso cufnaanta;
birta, potassium iyo magnesium waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan hababka wadnaha iyo wareegga wareegga jirka, si caadi ah u cadaadiya dhiigga, ritamka iyo heerka garaaca wadnaha.
la karkariyey caanaha, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida ficil-celiye, diaphoretic iyo febrifuge;
Faytamiin B waxay waxyeello u geysataa nidaamka dareemayaasha: waxay hagaajinaysaa niyadda, si joogta ah u dhaqdhaqaaqa hawlaha neerfaha, kordhinta waxtarka.
Waa muhiim! Sababtoo ah saameynta cilladda jilicsan, laguma talinayo in la cuno berde ka hor munaasabad masuuliyad, safar, iwm.
Dhirta waxaa loo tixgeliyaa inay tahay "miro dheddig ah", oo leh nooc kasta oo ah caqiido, calaamado iyo cuntooyin si qoto-dheer u qancinaya dhinacyada caqliga leh iyo kuwa hufan.
Waa maxay miraha waxtarka leh ee la qalajiyey?
Kuwa doonaya in ay lumiyaan kilogram-yada aan loo baahnayn waxay isticmaali karaan habka hal maalin "fig" loo diyaariyo toddobaadle. Xaqiiqdii, marka lagu daro 100 g oo ah khudradda la qalajiyey maanta, waxay u egtahay in ay cunteyaal kalluunka khudradda ceeriin ah, nus kiilo khudaar ceyriin ah iyo 2 litir oo ah nonfat kefir.
Dumarka waxay jecel yihiin macmacaanka, laakiin badanaa waa inay iska ilaaliyaan. Beddel aad u wanaagsan wuxuu noqon karaa miraha yar ee la qalajiyey, taas oo, oo dhan, macmacaanka oo dhan, ayaa aad uga faa'iideysanaya shokos, nacnac, jajabyo, iwm.
Laga soo bilaabo dhaqanka Oriental Orient, talooyin ayaa loo qaaday si loo yareeyo xanuunka caadada adoo cunaya dhowr berry ah.
Sawirada kuma koobnaan kartid miisaanka xad-dhaafka ah, laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa helitaanka maqnaanshaha, haddii aad ogtahay sida loo cuno: isticmaalka joogtada ah ee tiro badan maadama kalooriga ah ee sheyga ayaa si dhakhso ah u dari doona kiilogaraamyada, halka isticmaalka cabbirka uu nadiifin doono mindhicirada, taas oo yareyneysa miisaanka.
Midho berde ah, aan la daaweyn oo faa'iido leh, waxaad cuni kartaa oo keliya meesha uu ku korayo, maxaa yeelay waxay leedahay nolol shaf ah oo kooban - dhowr saacadood ka dib marka laga saaro geed.
Wuxuu si buuxda u caddeeyaa mid ka mid ah magaciisa "tartar" - halsano wuxuu bilaabmaa si dhakhso ah.
Ma taqaanaa? Naqshad ficil ah oo lagu magacaabo "fig", oo calaamad u ah galmada ama muujinta xubnaha galmada by tafsiiro kala duwan, waxay leeyihiin xididada qadiimiga ah waxayna ku xiran tahay xaaladda iyo dhaqanka, cayda, soo jeedin qarsoodi ah, hab qarsoodi ah si looga takhaluso jinniyo sharafeed, muujinta khilaaf iyo is-diidmo, diidmo laga bilaabo addeecida iyo xitaa daaweyn, tusaale ahaan, laga bilaabo ari.
Baahida aan loo baahneyn in la yiraahdo, waxaa wanaagsan inaadan ka iibsanin shisheeyaha shakiga leh iyo meelaha aan la ogayn, oo ay ku jiraan injirta. Caraf udgoonku waa mid fiican oo macaan leh, waa inaysan noqon mid taajir ah. Haddii midhuhu midabkeedu uu bararayo, way baaba'eysaa. Miraha tayada cusub waa inay noqotaa:
dhaawac aan farsamo lahayn;
inta ugu badan ee hooska mugdiga ah ee laga helo noocyada kala duwan;
waa in ay doorbidaan berry ee cabbirka isku mid ah
Tirooyin badan oo miraha ah waxay muujinayaan dhadhan sare.
Gaadiidka sonkorta cusub waxaa lagu sameeyaa daryeel wanaagsan: dhaawaca miro ayaa si weyn u yareynaya noloshoodii hore ee shelf.
Waa muhiim! Weligaa ha iibsan midho adag, midho-dhalasho - Inaanay "gaadho" guriga, sida kaymaha ama yaanyada.
Miraha la qalajiyey ayaa la heli karaa, waa la iibsan karaa wakhti kasta sanadka. Dooro midabka cagaarka ah, beige ama miro cawl, iyadoo ku xiran kala duwanaanta. Talooyin ku saabsan Xulashada Noocyada Qalalan:
Miraha waa inay lahaadaan midab khafiif ah iyada oo aan loo eegin midabada ay kala duwan tahay. Miro qurux badan oo qurux badan ayaa lagu daaweeyaa bakteeriyada dioxide.
Miro gaar ah oo aan la daaweynin kimistana sidoo kale ma kala duwan yihiin.
Waxyaalaha tayada waxoogaa yar ayaa la faafiyaa.
Mararka qaarkood dusha sare ayaa lagu daboolay ubaxyada cad, taas oo ah gulukoosta crystallized. Waxyaabaha noocan oo kale ahi waa macaan.
Tilmaamaha qalalan ee qalooca ee isku dhafan leh dhadhan ama dhadhan cusbo leh ayaa muujinaya in alaabtu ay jabtay.
Xitaa haddii aad kalsooni ku qabtid tayada alaabta la iibsaday, waxaa fiican in biyo lagu rusheeyo saacad ka hor isticmaalka si loo kala tago xeryahooda waxyeelada leh.
Ma taqaanaa? Ciise wuxuu ku yaal geedkii berdaha ma uu helin miro, oo habaar ku ridey, ka dibna geedkii geedka, oo geedkii berde - calaamadda falkooda
Berry berri waa in lagu keydiyaa qaab shaqeynaya, mid cusubna wuxuu leeyahay nolol shelf.
Haddii aad nasiib u leedahay in ay ahaato dhamaadka xagaaga ee gobolka halkaas oo berri this yaab leh u koraya, oo aad u suurtagashay in ay u helaan cunto, sida ugu dhakhsaha badan cun. Haddii ay jirto baahi loo qabo kaydinta, isticmaal qaboojiyaha. Heerkulku waa inuu ahaado ilaa 1 ° C. Nolol shafka ugu badnaan waa maalmo yar., iyada oo ku xidhan xaaladda bilawga ah ee alaabta.
Ka tag heerkulka qolka, malabka miraha isla maalintaas.
Waxaad sidoo kale xiri kartaa. Tani waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta alaabta qiimaha leh ee alaabta. Alaabta ceeriin ee noocan ah waa in lagu keydiyaa at -15 ° C.
Qof kasta ogyahay sida loo xafidayo berde berri ah. In qalalan, qabow, meel mugdi ah, waxaa la keydiyaa dhowr bilood: dheeraadka ah hawada hawada iyo hoos u heerkulka. Marka aan la dabaqayn shuruudaha alaabtu waxay noqotaa qoyan, cayayaanka waxyeellada leh ayaa ku jira. Weelka waa in si adag loo xiraa. Qorraxdu way ka baxday.
Ma taqaanaa? Giriiggii qadiimka ahaa ee la xidhiidhay miraha miraha ayaa awood u leh inay dhiirogeliyaan geesinimada iyo awoodda, sidaas darteed ciyaartoydii ka hadlayay Olombikada, waxay ku jireen miriqyada cuntooyinka oo ay ku soo badanayeen tiro badan. Dagaalyahannadii waxay qaateen miro qallalan oo ay la socdaan, gaar ahaan haddii ay khasab ku noqotey in ay soo afjaraan marxalado dheer iyo mid adag.
Ka hor inta aan la isticmaalin, waxaa lagula talinayaa in la qooyay berde berbera ah saacad biyo diirran, taasoo burburinaysa kiimikada. Biyaha kulaylku waxay burburin karaan qeyb ka mid ah walxaha waxtarka leh ee sheyga.
Qof caafimaad qaba wuxuu cuni karaa miro beruud ah qaab kasta. Qalabkan qalaad ayaa soo saari doona qoraalladiisa saxan kasta:
qaab cusub ama la qalajiyey ayaa lagu beddelay nacnac iyo shokos;
miraha la qalajiyey ayaa lagu daraa kabaha, loo isticmaalo buuxinta keegga iyo waxyaabaha kale;
Berry dhoobo aan la cuni karin ceeriin, laakiin waxay noqdaan kuwo aad u dhadhan fiican leh, la jarjaray oo la dubay nuts iyo malab;
Miraha bislaaday, la jarjaray oo labbisto kareemo ama labeen dhanaan, waa macmacaan aad u wanaagsan oo nafaqo leh;
Geedka berri ah oo la adeegsaday jilayaal jilicsan ayaa ah cunto fudud oo loogu talagalay khamri cad ama champagne;
ku dar badeecada hilibka suugada, suxuunta digaaga, saladhyada, cunto fudud;
Dabcan, miro ayaa laga goostay siyaabaha dhaqameedka: macaanka, jam, marshmallow, cabitaan miro qasacadaysan;
oo ah berri berde ah xitaa khamri.
Tijaabadu waxay ku dhowaad dhammaan sifooyinka wanaagsan ee badeecada waxaana loo isticmaalaa macmacaanka, dawada iyo daroogada ka dib dib u hagaajinta cudurrada.
Marka laga soo tago muraayadaha ujeeddooyinka culeyska, waxay sidoo kale u isticmaalaan daawada momordika, blueberry, plum, sinjiga, khudaarta, iyo masalan.
Ma taqaanaa? Dhaqanka hore ee Giriigga wuxuu sidoo kale siiyey miraha miraha macnaha erotic ah. Waxay calaamad u yihiin xubnaha taranka: guud ahaan - raggu way kala jajabeen - haweenka. Macluumaadkani wuxuu ku laabanayaa IX-Qarniyadii VIII ee BC. er Sawirrada waxaa si cad u soo bandhigaya sawirada ilaahyada bacriminta iyo winemaking ee Dionysus, oo adeeggiisu lahaa macnaha erotic ah.
Maaha wax la yaab leh in sheyga waxtarka leh ee la helay uu soo helay codsigiisana wuxuu qabsadey nukliye jilicsan.
Waxay awood u leedahay inay dib u soo noolaato, qoyso oo jilciso. Waxaa loo isticmaalaa:
lakabka lidka ku ah.
Nadiifinta maalinlaha ah, anti-gabowga, daboolka anti-bararka iyo maskaxaha iyo isku dhafka miraha miraha si weyn ayaa loo isticmaalaa oo keena saameyn la taaban karo.
Kombiyuutarka, miro, kalluunka, broccoli, sinjiga, strawberry, qaraha, dabocad, amaranth, cherry shimbir, khudaar ayaa loo arkaa dhirta ugu caansan.
Sawirro - alaabo gaar ah, sifooyinka faa'iido leh ee loo yaqaanay muddo dheer waxaana loo isticmaalaa illaa maanta, laakiin waxa kale oo ay leedahay khilaaf.
Laguma talinayo in loo isticmaalo kuwa ku xanuunsanaya:
geeddi-socodka xaalad-ba'an ee qayb kasta oo ka mid ah mareenka mindhicirka;
Daryeelka, waxaa loo isticmaali karaa haweenka uurka leh iyo hooyooyinka kalkaaliyaha ah. Inkasta oo ay ugu yartahay wax ka horjeeda, dadka aan haysan, ha cunin tiro geedo farabadan. Cunno maalinle ah oo ku filan jirka jirka. - 2-4 gogo '.
Sawirku wuxuu leeyahay faa'iido aan la diidaneyn oo wuxuu ku jiraa meel ku haboon alaabooyinka bogsashada. Maaha oo kaliya faa'iido leh, laakiin sidoo kale waa mid aad u dhadhan labadaba laftiisa iyo isku dhafka alaabooyinka kale: joogitaankeeda wuxuu ku darayaa qoraallada caanoodka ah ee suxuunta.
Inkasta oo qiimaha nafaqada iyo bogsashada, ka hor inta aan lagu darin miraayadan mucjisada cuntada, ka-hortagga iyo dulqaadka shakhsi ahaaneed waa in laga reebo.